ဘယ်လို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ မွေးမြူကြမလဲ ~ The ICT.com.mm Blog
ဘယ်လို စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေ မွေးမြူကြမလဲ
Posted by Ma Naw Phyu Lay
လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်ထားပြီး စိတ်ဆိုတဲ့ အရာတွဲလျက် ပါလာပါတယ်။ သဘာ၀က ဖန်တီးထားတဲ့ ဒီနေ့ မိုးရွာရင် ရွာမယ်။ နေပူချင် ပူမယ်ဆိုတဲ့ အရာတောင် ဖြစ်ပေါ် သေးတာပဲ။ လူတွေရဲ့ စိတ်မှာလည်း စိတ်ဓာတ် ကျချိန်ရှိမယ်၊ စိတ်ဓာတ်တက်ချိန် ရှိချင် ရှိမယ်။ အပူအအေး မမျှတသလိုပါပဲ။ ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲနေတဲ့ ၀န်းကျင်ပေါ် မူတည်ပြီး အရာအားလုံးက ပြောင်းလဲနေတဲ့ အတွက် စိတ်ပျော်နေတဲ့ အချိန်နှင့် စိတ်ညစ် နေတဲ့ အချိန်တွေ ရှိနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူသားတွေက အမြဲ စိတ်ပျော်နေ သလား ဒါမှမဟုတ် အမြဲ စိတ်ညစ်နေ သလား စာဖတ်သူ အရင် လေ့လာကြည့်ပါ။ အမြဲ ဒီလို မဖြစ်နေဘူးဆိုတဲ့ လေ့လာ တွေ့ရှိချက်ကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခါတလေ စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့အခါ စာဖတ်သူ စဉ်းစားရမှာက အရာအားလုံး လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကို တိုးတက် ဖွံ့ဖြိုးစေတဲ့အချက်ဟာ ပြင်းပြစွာ ယုံကြည် ခြင်းနှင့် မဆုတ်မနစ်သော ဇွဲလုံ့လ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဘာအလုပ်ပဲ လုပ်လုပ် မိမိလုပ်တဲ့ အလုပ်ကို အလွန်ပြင်းပြစွာ ယုံကြည်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ခံစားချက်နှင့် ယုံကြည်နိုင်အောင် မိမိ လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရည်ရွယ်ချက်က မျှတတယ်လို့ ယုံ ကြည်နေရမယ်။ လူသားတွေ ကောင်းကျိုး အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်ရမယ်။ တရား နည်းလမ်းကျတယ်ဆိုတာ ယုံကြည် ရမယ်။ ဒီလိုမျိုး ပြင်းပြင်းပြပြ ယုံကြည်သူ တွေမှာ မဆုတ်မနစ်တဲ့ ဇွဲလုံ့လဆိုတာ ဖြစ် တည်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်တပ်ကြီးတွေ၊ နိုင်ငံကြီးတွေဟာ အလွန် အင်အားကြီးမား သော်လည်း တာ၀န်ယူနေသူတွေဟာ မိမိ တို့ လုပ်နေရတာကို မိမိတို့ မယုံကြည် တော့ဘူးဆိုရင် ဘာဇွဲလုံ့လမှ မရှိတော့ပဲ ဇွဲစိတ်ဓာတ် ပျောက်ကွယ်သွားတဲ့ နေ့ဟာ အရာရာကို ဆုံးရံှုးသွားတဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ဇွဲရှိတယ်ဆိုတာ ပြောတာသာ လွယ်ပြီး တကယ်အလုပ်မှာတော့ မလွယ်လှ ပါဘူး။ တကယ်တမ်း ခံစားလာရချိန်မှာ မိမိ ခံစားနိုင်တဲ့ အတိုင်းအဆထက် များစွာ ပိုမို ခံစားကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ကျော်လွားနိုင်မှသာ ဇွဲရှိသူလို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်မဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်မှတ် ထားတာကတော့ ကောက်ရိုးမီးပါပဲ။ ဘာ ကြောင့် ကောက်ရိုးမီးလည်းဆိုရင် ဟုန်းခနဲ ထတောက်ပြီး ငြိမ်းသွားတဲ့အခါ ပြာမှုန့် တောင် မကျန်လောက်အောင်ကို ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထရှိလို့ပါပဲ။ စာဖတ်သူကိုတော့ ဒီလို မဖြစ်စေချင်ပါ။
ကျွန်မတို့သည် အရာရာကို ဇွဲနဲ့ လုပ်မယ် ဆိုတဲ့စိတ် အစဉ်ကိန်းအောင်းနေဖို့ အလွန် လိုအပ်ပါတယ်။ လူသားတွေဟာ အောင်မြင် မှုကို လိုလားသူများဖြစ်ပါတယ်။ ရံှုးနိမ့်မှု ဆို တာ ကြားတောင် မကြားလိုသူများ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့ဘ၀မှာ ကြုံတွေ့ရမှာက အောင်မြင်မှုရော ဆုံးရံှုးမှုရော နှစ်မျိုးစလုံး ပါပဲ။ အောင်မြင်မှုရရှိချိန်မှာ လူသားတွေဟာ ပျော်ရွှင်ကြတယ်။ ၀မ်းသာကြတယ်။ ဂုဏ် ယူလေ့ရှိကြပါတယ်။ ရံှုးနိမ့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ၀မ်းနည်းတတ်ကြပါတယ်။ ယူကျုံးမရ ဖြစ် ကြတယ်။ ရှက်ကြတယ်။ လူတွေနဲ့ ေ၀းရာ ကို ရှောင်နေချင််တယ်။ အား ငယ်စိတ်တွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျ မှုတွေ လိုက်လာတာပါပဲ။ ဒါ ကြောင့် ရံှုးနိမ့်ရမှာကို အလွန် ကြောက်ကြပါတယ်။ ဒါပေ မယ့် ရံှုးနိမ့်မှုတွေကို ရှောင်လွှဲ လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ တကယ် တမ်းကျတော့ အောင်မြင်မှု တွေဟာ ရံှုးနိမ့်မှုတွေက စတာ များပါတယ်။ ရံှုးနိမ့်မှု တွေဟာ အောင်မြင်မှုကို တက်လှမ်းမည့် လှေကား ထစ်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူ သားတွေဟာ ကိုယ်ပိုင် လုပ် ငန်းငယ်လေးတွေ လုပ်ကိုင် ကြသည်မှသည် မိမိ ယုံ ကြည်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များ ကို ပြီးမြောက်အောင် လုပ် လိုသူများအထိ အောင်မြင် အောင် ကြိုးစားနေကြ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မြင်ရန်အတွက် ပထမဆုံး အရေး ကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်က ထက်သန် ပြင်းပြတဲ့ စိတ် ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိရည်ရွယ်ချက်ကို မိမိပြင်းပြင်းပြပြ ယုံကြည်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရော့တိရော့ရဲနှင့် ပြီးစလွယ်ဆိုရင် အောင် မြင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထက်သန်ပြင်းပြတဲ့ စိတ် ဆိုတာက မိမိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ မိမိရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာ မျှတပြီး အများ သဘောတူထားတဲ့ တရားဥပဒေနှင့်အညီ ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အရင်ဆုံးယုံကြည်မှုပါပဲ။ ဒီလိုမှ မယုံကြည်ဘူးဆိုရင် ဇွဲလုံ့လဆိုတာ ဘယ်တော့မှ ပေါ်မလာတော့ပါဘူး။ မိမိ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို ယုံကြည်တယ်လို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ ယုံကြည်ပြီဆိုမှတော့ ဒီ အလုပ်ကို လုပ်ရတာလည်း ကြိုက်မှာပါပဲ။ အလုပ်လုပ်နေရတာကိုက ရင်ထဲမှာ စိတ် ဓာတ် ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် လုပ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ကို လုပ်ရ တာ မကြိုက် ပြန်ရင်လည်း အောင်မြင်ဖို့ ဆိုတဲ့နေရာမှာ မလွယ်ကူလှပါဘူး။ နောက် တစ်ခု ယုံကြည်ရမှာက ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ အလုပ်တွေ ဆိုတာ မိမိအတွက်လည်း ကောင်းတာ ဖြစ်တယ်။
မိမိရဲ့မိသားစုနှင့် ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေလည်း ကောင်း တာ ဖြစ်ရမယ်။ မိမိရဲ့ လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်း အတွက်လည်း ကောင်းတာ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်အပြည့် ရင်မှာ ပြင်းပြင်းပြပြ ယုံ ကြည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နဂိုကတည်းကိုက ပျော့ပျော့ညံ့ညံ့နဲ့ အရံှုးပေးလိုစိတ် ရှိသူတွေ ဟာ အောင်မြင်ဖို့ေ၀းစွ ရှင်သန်ဖို့တောင် မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်ရန် အတွက် အရေးကြီးဆုံး ပထမအချက်က ထက်သန် ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက် စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီဆိုရင် ခဏ တာ လုပ်လက်စတွေကို ရပ်ထားပြီး ပျော်ရွှင် စေမယ့် စိတ်ကို အနားပေးစေမယ့် အပြု အမူတွေ လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အပေါင်းအသင်းနှင့် ဈေး၀ယ် ထွက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လေကောင်း လေသန့်ရနိုင်မယ့်နေရာမှာ ခဏတာ အပန်း ဖြေတာပဲဖြစ်ဖြစ် လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စိတ် ညစ်ပုံ စိတ်ညစ်နည်း မတူညီတဲ့အခါ ကိုယ် ဘယ်အရာကို လုပ်ဖို့ အားသန်သလဲဆိုတဲ့ အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ပြုမူဆောင်ရွက်ကြည့် လိုက်ပါ။ မိမိရဲ့ တောင့်တမှုဟာ မီးများလို လောင်မြိုက်နေမှ အောင်မြင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတိုင်း စိတ်နှင့် ဆက်နွှယ်နေတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှု မှန် ကန်အောင်နှင့် စိတ်ဓာတ်မကျစေဖို့ အရေး ကြီးဆုံး အချက်ကတော့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်နေဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ စိတ် ဓာတ်ကျခြင်းဆိုတဲ့ အနှောင့်အယှက် တစ်စုံ တစ်ရာ မ၀င်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း စိတ်ညစ်၊ စိတ်ရှုပ်နေသူများနှင့် သာ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပတ်၀န်းကျင် ဆိုရင် တော့ စာဖတ်သူအနေဖြင့် စိတ်ဓာတ် တက် ကြွလာဖွယ် အချည်းနှီးဖြစ်မည်မှာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ဖို့ စိတ်ဓာတ် ခွန်အားတွေ ဖြစ်စေမယ့် စာအုပ်တွေ လက် လှမ်းမှီ သလောက် ဖတ်ရှု သင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က ပတ်၀န်းကျင်ကောင်း တစ်ခု ဖန်တီးပါ။ စာဖတ်သူ အမြဲ ပေါင်းသင်း နေတဲ့သူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဂရုစိုက်ပါ။ ပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေ၊ အကောင်း မြင်တတ် သူတွေနဲ့ ပေါင်းသင်းမယ်ဆိုရင် သင်လည်း ပိုပြီး ပျော်ရွှင်လာပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင့်အပေါင်း အသင်းတွေဟာ အဆိုးမြင် တတ်သူတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီ အတွေးတွေဟာ သင့်ကိုလည်း လွှမ်းမိုးလာ နိုင်တယ်ဆိုတာ ဂရုပြုပါ။
စာဖတ်သူရဲ့ ဘ၀ဟာ တခြား တစ် ယောက်ယောက်ရဲ့ ဘ၀နဲ့ ဘယ်တော့မှ တစ်သမတ်တည်း မတူနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ် မ တတ်နိုင်တဲ့ အ၀တ်အစား ၀တ်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်မစီးနိုင်တဲ့ကား စီးတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ် မနေနိုင်တဲ့ အိမ်မျိုးမှာ နေသူတွေကတော့ ကိုယ့်အနားမှာ အမြဲတမ်း ရှိနေမှာပါပဲ။ ဒါ ကြောင့် စိတ်ဓာတ်ကျတာတွေ၊ စိတ်ညစ်တာ တွေ၊ စိတ်ငြီးငြူမှုတွေ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒါကို ကျင့်သားရအောင် လုပ်ပါ။ နေသားကျ သွားပြီ ဆိုရင်တော့ ဘာမှ ပြဿနာ မရှိ တော့ပါဘူး။ တခြား တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်မှုကို စာဖတ်သူကိုယ်ပိုင် အောင် မြင်မှု ရရှိဖို့အတွက် တွန်းအားတစ်ခုအဖြစ် အသုံး ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာဖတ်သူမှာ မရှိတဲ့အရာတွေအတွက်တော့ ဘယ်တော့ မှ စိတ်မကောင်း မဖြစ်ပါနဲ့ ။
အခြားသူတွေကို များများကူညီလေ၊ စာဖတ်သူရဲ့ ဘ၀နဲ့ ပတ် သက်လို့ ညည်းတွားနေဖို့ အချိန်မရလေ ပါပဲ။ ဒါတင်မကပါဘူး၊ လူတွေကို ကူညီ ခြင်းက စာဖတ်သူကို တကယ်ပဲ ပျော်ရွှင် စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ စိတ်ဓာတ်ကျမှု ဆို တာလည်း ၀င်ရောက် မလာနိုင်တော့တဲ့ အတွက် အမြဲ ပျော်ရွှင်တက်ကြွ လန်းဆန်း နေမယ်ဆိုတာ စာဖတ်သူ ကိုယ်တိုင် ခံစား သိနားလည််နိုင်ဖို့အတွက် ယခုပဲ လုပ် ဆောင်ကြည့်လိုက်ပါလို့ တိုက်တွန်း ပြော ကြားလိုက် ရပါတော့သည်။
About Ma Naw Phyu Lay
အမည်ရင်းမှာ ယမင်းအေး ဖြစ်ပြီး B.Sc (Zool) Q (Credit) နဲ့ ၂၀၀၂ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရရှိခဲ့၊ Post Graduate Diploma in Computer Application ကွန်ပျူတာဘွဲ့ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်နှင့် Research and Development, Diploma in Business Management ဘာသာရပ်များကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အောင်မြင်ခဲ့၊ စာပေကို ငယ်ငယ်တည်းက ဝါသနာပါပြီး ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင် သုတ၊ ရသ၊ သတင်း၊ ဆောင်းပါး၊ ကဗျာများ စတင်ကာ ရေးသားခဲ့ပြီး စာပေကို မြတ်နိုးသူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင် ၀င်ရောက်ခဲ့ပြီး တစ်ဖက်မှ ဝါသနာပါရာ စာပေများ ရေးသားလျက် ရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင် Center for Vocational Training (CVT Myanmar) သင်တန်းကျောင်းတွင် Media Related Officer အဖြစ် တာ၀န်ထမ်းဆောင်ရင်း ဝါသနာပါရာ စာပေများ ဆက်လက်ရေးသားလျက် ရှိပြီး စာရေးဆရာမကောင်း တစ်ဦးဖြစ်ရန် ရည်သန်လျက် ရှိပါသည်။ View all posts by Ma Naw Phyu Lay →
Newer ေ​တာ​ေ​ြ​ကာင်နာ​မည်ကို ရ​ပ​်​ြ​ပီး ကယ်လီ​ဖိုး​နီး​ယား​ကို ဂု​ဏ​်​ြ​ပု​ခဲ့​တဲ့OS X Mavericks
Older ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ ကလေးငယ် ၁၀သန်း ကျော် အစေခံဖြစ်နေ
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကို မြှင့်တင်ခြင်း
Posted by Kaung Sint Aung
မိဘကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လို့ ဘာတွေလိုအပ်မယ်လို့ သင်ထင်ပါသလဲ? ကလေးတွေကို မြင့်မားတဲ့ အောင်မြင်သူတွေ ဖြစ်စေဖို့ ဘယ်လို သင်ကြားရမလဲဆိုတဲ့ နည...
Categories Select Category Apps Architecture Archive Audio Audio & Video Automobile Beauty Business Cables & Adapters Cameras Comics Currency Counting Machine Design Desktop Education Featured Foods Gadgets Gaming Graphic Cards Graphics HDD Health How-to Interview Laptops Lifestyle Makeup Mobile News Newsroom Opinion Phones Policy & Law Projectors Promotion Review Smart Home Tablets Travel Web Webcams Weekly Journal
Acer Android App Apple AppleOSes Asus Cartoon Computer Dell Facebook Game games Gmail GoldenPowerTechnology Google Health HP HTC HUAWEI iOS7iPad iPhone iPhone 5S iPhone6KMD laptops Lenovo LG MCPA Microsoft mobile phone Motors.com.mm Myanmar Ooredoo Opinion Royal Smart Trading Samsung Samsung Galaxy S5 ShweLaminNagar smartphone Sony tablet Wallpaper Windows windows 8